UGREEN HiTune X6: mkpọtụ na-akagbu ekweisi maka naanị € 40,49 | esi m na mac
UGREEN HiTune X6: ụda na-akagbu ekweisi maka naanị € 40,49
Mgbe ịzụrụ maka ekweisi ikuku, ọnụọgụ nhọrọ dị ugbu a na ahịa Ọ dị elu nke ukwuu, ọ bụrụhaala na nhọrọ anyị anaghị aga site n'ịzụta ụdị AirPods dị iche iche nke Apple na-enye anyị.
Ọ bụrụ na akpa gị anaghị ekwe ya ma ọ bụ na ike gwụrụ gị nke ịla n'iyi AirPods gị, site na iPhone News anyị na-enye gị nhọrọ na-adọrọ mmasị. Ana m ekwu maka ya UGREEN HiTune X6, mkpọtụ na-akagbu ekweisi Kedu ihe anyị nwere ike ịhụ na Amazon maka € 40,49 ọ bụrụ na anyị ejiri ohere nke onyinye anyị na-egosi gị n'isiokwu a malite na Jenụwarị 17 ruo 23 nke ọnwa a, ebe ọ bụ na ọnụahịa ya bụ 59,90 euro.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu ozi gbasara onye nrụpụta a, a na m akpọ gị oku ka ị gaa n'ihu na-agụ.
1 Ọnye na-bụ UGREEN?
2 Ihe UGREEN HiTune X6 na-enye anyị
2.1 Nkagbu mkpọtụ ọrụ
2.2 Igwe okwu 6 maka mkparịta ụka doro anya
2.3 Ogologo oge
2.5 mfe ijikọ
2.6 Oge elekere 26 nke ịkpọghachi ya na igbe nchaji
2.7 Njikwa aka
2.8 Mmiri eguzogide ọgwụ
3 Ihe dị n’igbe ahụ
4 Nwee onyinye ahụ
Ọnye na-bụ UGREEN?
Ugreen bụ otu n'ime ha ndị na-emepụta ngwa ngwa kacha ochie na ahịa, Onye na-emepụta ihe na-enye anyị ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke eriri, chaja, HUBs, iPhone mounts, adapters of all kinds of connections... ngwaahịa na ọ na-ere na ihe karịrị 100 mba na ihe karịrị 40 nde ahịa gburugburu ụwa .
Ruo nwa oge, na-akụkwa na ekweisi ikuku, ahịa na-aga n'ihu na-eto eto na oge ọ bụla ọ na-agụnye ndị asọmpi ọhụrụ.
Site na HiTune X6 ọhụrụ, onye nrụpụta a na-agbasawanye ụdị ekweisi ikuku nke ọ na-enye ruo ugbu a. Ma, na ihe ọhụrụ dị mkpa, ebe ọ bụ na nke a bụ ihe mbụ nlereanya nke a emeputa na gụnyere sistemụ kagbuo mkpọtụ na-arụ ọrụ.
Ekele maka usoro kagbuo mkpọtụ a, anyị nwere ike kewapụ onwe anyị na gburugburu anyị kpam kpam na-enweghị ntị anyị na-emetụta site n'ịbụ ndị a manyere ime ka ụda olu elu iji nweta ihe dịpụrụ adịpụ anyị na-achọ.
Ihe UGREEN HiTune X6 na-enye anyị
UGREEN HiTune X6 bụ ekweisi nwere kagbuo mkpọtụ na-arụ ọrụ, dị ka Apple's AirPods Pro.
Daalụ maka ịkagbu mkpọtụ arụ ọrụ, HiTune X6 nwere ike kagbuo mkpọtụ ọ bụla n'èzí nke ga-eme ka anyị kewapụ onwe anyị kpam kpam site na gburugburu ebe obibi anyị na-ezere inwe ụda olu, nke na-enye anyị ohere ịnụ ụtọ egwu kachasị amasị anyị na gburugburu ebe ọ bụla.
Igwe ekweisi UGREEN ọhụrụ ndị a na-etinye onye ọkwọ ụgbọ ala ike 10-millimiter nwere diaphragm DLC nke na-enye ohere maka ụda ezi uche dị na ya. na-ezere mgbagha mgbagha ma na elu na obere ugboro.
Igwe okwu 6 maka mkparịta ụka doro anya
Igwe ekwe ntị na-akagbu mkpọtụ na-eburu ụda n'èzí kagbuo ya ka ị nwee ike wepụ ya n'ọwa ntị anyị. UGREEN HiTune X6 na-etinye igwe okwu 6 na mkpokọta, igwe okwu 3 maka ekwe ntị ọ bụla.
Igwe okwu ndị a na-elekọta ikewapụ ụda na gburugburu anyị ozugbo iwepụta ụda olu mmadụ doro anya site n'ịkwụsị 90% nke mkpọtụ ambient iji nye anyị àgwà oku dị elu ma e jiri ya tụnyere ekweisi ikuku ndị ọzọ na-enweghị nkà na ụzụ kagbuo mkpọtụ.
Ejibeghị ekweisi ikuku mara dị ka ezigbo nhọrọ maka ịnụ ụtọ ihe nkiri ma ọ bụ egwuregwu vidiyo, n'ihi latency. UGREEN HiTune X6 na-agụnye ụdị egwuregwu na-enye nkwụsịtụ nke 50 ms.
Daalụ maka obere latency a, anyị agaghị achọpụta ụdị igbu oge ọ bụla na ọdịyo ka anyị na-anụ ụtọ egwuregwu ma ọ bụ ihe nkiri kachasị amasị anyị site na ngwaọrụ anyị, ọ bụrụ iPhone, iPad, Mac, iPod touch ...
Iji jikwaa mbufe ọdịyo, UGREEN na-eji ya 5.1 mbipute nke Bluetooth, nke na-enye ya ohere ịnye njikọ ikuku kwụsiri ike, ngwa ngwa yana dakọtara na ngwaọrụ iOS na gam akporo ọ bụla.
Ọzọkwa, gụnyere nkwado maka ACC na SBC iji wepụta bass miri emi zuru oke na ụda dị elu n'ozuzu ya. N'ikpeazụ ma ọ dịghị ihe ọzọ, ekwesịrị icheta na ụdị bluetooth a na-eri ọbụna obere ike karịa nsụgharị ndị gara aga.
Ozugbo anyị jikọtara UGREEN HiTune X6 na iPhone, iPad ma ọ bụ Mac anyị, oge ọ bụla anyị mepere igbe nchaji, ha ga-ejikọta na akpaghị aka na ngwaọrụ ejikọrọ ikpeazụ.
Oge elekere 26 nke ịkpọghachi ya na igbe nchaji
Igwe ekweisi sitere na ndị nrụpụta a nwere a nnwere onwe nke awa 6 nke ịkpọghachi na-ejighi mkpọtụ kagbuo. Ọ bụrụ na anyị na-arụ ọrụ ya, dị ka onye nrụpụta si kwuo, a na-ebelata ikike ahụ naanị nkeji 30, yana nnwere onwe zuru oke nke awa 5,5.
Na-etinye a usoro ngwa ngwa nke ahụ na-enye anyị ohere ịgbakwunye otu elekere iji HiTune X6 na naanị nkeji iri nke chaja. Ọ bụrụ na anyị anaghị eme ọsọ ọsọ, n'ime naanị otu awa na ọkara, anyị nwere ike kwụọ ha ụgwọ. Akpa nchaji na-ewe awa abụọ iji chajịa nke ọma.
UGREEN HiTine X6 anaghị agụnye nkwado maka chaja ikuku, n'ihi ya, a ga-amanye anyị iji eriri USB-C gụnyere n'igbe ahụ mee ya.
Site na emetụ aka nke na-ejikọta HiTune X6, anyị nwere ike ịgbalite ma gbanyụọ nkwụsịtụ mkpọtụ, kwụsịtụ ma kpọọ egwu, kwụchie ma bulie oku, gaa na egwu ọzọ ma ọ bụ nke gara aga wee mee ka onye enyemaka olu rụọ ọrụ.
Mmiri eguzogide ọgwụ
Ọ bụrụ na ị na-achọ ekweisi iji na-eme egwuregwu, ihe ngwọta nke UGREEN na-enye bara ezigbo uru kemgbe gụnyere asambodo IPX5
Ihe dị n’igbe ahụ
Igbe UGREEN HiTune X6 gụnyere nha atọ nke earplugs ka ọ dabara na ntị nke ndị ọrụ niile, plọg ejiri silicone mee nke na-enye njide dị nchebe ga-egbochi ha ịdaba na mmegharị mberede ọ bụla.
Yana earbuds, charging case, na atọ nke tampons, ọ bụkwa gụnyere eriri USB-C dị sentimita 50 n'ime igbe ahụ Ibunye ha na akwụkwọ ntuziaka onye ọrụ kpochapụwo ebe egosiri anyị ka esi ejikọta ha na ngwaọrụ anyị.
Nwee onyinye ahụ
El Ọnụahịa mbụ nke UGREEN HiTune X6 bụ euro 59,99. Ma, anyị na-eji uru nke coupon ego gụnyere na coupon FIGRH9JB tupu ị kwụọ ụgwọ, njedebe nke mkpọtụ a na-akagbu ekweisi bụ 40,49 €.
Iji nweta uru nke onyinye a, ị ga-eji coupon (ọ dị na ibe ngwaahịa) yana koodu nke anyị gosipụtara na paragraf gara aga.
Nkwalite a bụ naanị dị site na Jenụwarị 17 ruo 23. Ị nwere ike iji ohere a na-enye ma nweta ụfọdụ ekweisi na-akagbu mkpọtụ na ọnụ ahịa ziri ezi site na njikọ ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » UGREEN HiTune X6: ụda na-akagbu ekweisi maka naanị € 40,49
The AirPods Max maka naanị euro 415 na Amazon
Apple ga-emechi loop na Apple Silicon na njedebe nke afọ a